” ဥသြ ဥသြ လို့ တွန်သံကြားပြန်တော့ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” ဥသြ ဥသြ လို့ တွန်သံကြားပြန်တော့ “
” ဥသြ ဥသြ လို့ တွန်သံကြားပြန်တော့ “
Posted by ခင်ခ on Mar 10, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 36 comments
” ဟေ့ သူငယ်ချင်း မင်းအတန်းချိန် မရှိဘူးလား မတက်ဘူးလား”
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် တို့ရဲ့ထိစပ်နေရာ တက္ကသိုလ်ကင်တင်း(စားသောက်တန်း)က ထိုင်နေကျ လက်ဘက်ရည် ဆိုင်လေးမှာ ခင်ခ တစ်ယောက် လဘက်ရည်သောက်ရင်း စီကရက်လေးဖွာ နေတုန်း Eco က သူငယ်ချင်း ပုတု ရောက်လာပြီး ၀င်ထိုင်ရင်းမေးလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရင်ဘဲ
” မင်းကလည်း အထူးအဆန်းလုပ်လို့ မေးနေသေးတယ် အတန်းချိန်ကတော့ ရှိနေတာဘဲလေ ငါတို့က ကျူတိုရီရယ်နဲ့ မေဂျာဘာသာလောက် အတန်းမှန်တဲ့ဟာကို မင်းကရော အတန်းပြီးသွားပြီလား “
” ငါက မနက်အတန်းပြီးသွားလို့ ကင်တင်း(စားသောက်တန်း) ကို ဆင်းလာတာနော် ဟေ့ ကျွန်တော်ကို ပေါ့စိမ့် တစ်ခွက်လုပ်ပါအုံး “
” ပုတုရာ မင်းရဲ့မချောလေး အတန်းတက်နေလို့ မင်းအတန်းတက်မြဲနေတာများ မသိတာကျလို့ “
” ဒါကတော့ ဒီလိုရှိတယ်လေ မင်းတောင် လက်တွေ့တန်းရှိတဲ့နေ့ဆို ပုံတွေဘာလို့ကြိုဆွဲတာလဲ ပလက် တီကယ်ခန်းထဲကျရင် ရန်ကင်းသူလေးကို ပုံကူဆွဲပေးဖို့အချိန်ရအောင်မလား “
” ဒါက ကူညီချင်စိတ်လေး အခံရှိလို့ပါကွ “
” ဟ မင်းတို့ နှစ်ယောက်ထဲလား ကျန်တဲ့သူတွေ မရောက်သေးဘူးလား “
ဆိုပြီး စားပွဲနားရောက်လာသူက ရူပဗေဒမေဂျာက ဂျိမ်း။
” နှစ်ယောက်ထဲ မြင်ပြီး မင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲလားတဲ့ နှစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး ” လို့ ခင်ခ ပြန်ပြောတော့
” ဒါဆို ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ “
” မင်းရောက်လာတော့ မင်းနဲ့ဆို သုံးယောက် လေ ” ပြန်ပြောတော့ သဘောကျပြီးရယ်လိုက်ကြတာ
အဲလိုနဲ့ ဟိုပြောဒီပြော ဟေလားဝါးလား လုပ်နေ့တုန်း နေ့လည် ထမင်းစားချိန်နီးတော့ ဇော်ကြီး၊ ကြည်ပေါ၊ အေးငယ်၊ အေးမိ၊ ကြည်ပေါ ၊ ငကောက် စသည်ဖြင့် မေဂျာစုံသူငယ်ချင်းတစ်သိုက်ရောက်လာကြပြီး နေ့လည်စာ မှာကာစားကြ နောက်ပြောင်ပြောကြနဲ့ ပျော်ရွှင်ဟားတိုက်ရယ်မောခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ရဲ့အရသာကို ပြန်တွေးမိရင် လွမ်းမောစရာပါဘဲ။
ကျွန်တော်တို့ ထိုင်နေကျ အခုကင်တင်းလေးက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ပြည်လမ်းဘက်အပေါက်က၀င်ရင် စီပွားရေးတက္ကသိုလ်ဝင်းရှေ့က လမ်းအတိုင်းဝင်နိုင်ပြီး သိပ္ပံမေဂျာဘာသာတွေ စာသင်ရတဲ့ ကျောင်းဆောင် တွေနဲ့ ကြားထဲမို့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာအခက်အချာကျတဲ့ လမ်းဘေးမှာရှိနေတာရယ် Eco နဲ့နီးတော့လည်း အဲဒီတုန်းက စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသူအင်အားက ပိုတယ်ဆိုတော့ အလှအပတရားတွေလည်း ခံစားစံစားရာနေရာပေါ့ဗျာ။
အဲဒီအချိန်မှာဘဲ အဲဒီတုန်းကကျွန်တော့ရင်ထဲစွဲမြဲနေတဲ့ ဆံပင်လေးရှည်ရှည် သနပ်ခါးလေးပါးပြင်တဖက်စီမှာ ပါးကွက်ပါးလေးလိမ်းလို့ လွယ်အိတ်အနီလေးလွယ်ကာကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ မေဂျာတူ အလှနတ်သမီး ရန်ကင်း သူလေးဆိုသူကျောင်သူလေး သူ့အဖော်တစ်ယောက်နဲ့ လျှောက်လှမ်းလာတယ်ဆိုရင်ဘဲ
” ဟေ့ ခင်ခ ဟိုမှာ မင်းရဲ့ အလှနတ်သမီးလေး လာနေတယ်လေ ” လို့ ဇော်ကြီးက စကားဝိုင်းထဲဖြတ်အပြော ခင်ခ လည်း ရှာဖွေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ လမ်းပေါ်လှမ်းကြည့်ပြီးတွေ့ပြီဆိုရင်ဘဲ သူ့ဆီအပြေးလေးအရောက်သွားဖို့ ထိုင်ရာကထလိုက်ရင်ဘဲ
” ဟေ့ ခင်ခ မင်းမှာစားထားတဲ့ဟာတွေအတွက် ရှင်းအုံးလေ “
” မင်းတို့ကလည်း တစ်ယောက်ယောက်စိုက်ရှင်းထားလိုက်ကွာ ပြန်လာရင်နှစ်ဆပြန်ပေးမယ် “
သြော် လူ့သဘောကလည်း အဲလိုမျိုးဆို ကုန်ရမှာမနှမျောတတ်ကြပုံများနော်။
ဒီလိုနဲ့ ရန်ကင်းသူလေးနား ခင်ခ ရောက်သွားရင်ဘဲ
” ကိုခင်ခ နေ့လည်စာ စားပြီးလား ကျမတို့ Hi မှာသွားစားမလို့ လိုက်ခဲ့ပါလား “
” နေ့လည်စာတော့ စားပြီးပါပြီ ဒါပေမယ့် လဘက်ရည်သောက်လိုက်ခဲ့မယ်လေ ” ဆိုပြီးအခွင့်အရေးရတုန်းမို့ လိုက်သွားတာပေါ့။
ခင်ခ တို့တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ အဲဒီအချိန်တုန်းက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ပြည်လမ်းဘက်က၀င်ပေါက်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ပြည်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ Hi ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုရှိတယ် အစားအသောက်လည်း စုံလင်လှသလို ဈေးကလည်း ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် သင့်သင့်တဲ့နှုန်းမို့ အစားများကြသလို အစားအသောက်အရသာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့။
” ကိုခင်ခ တစ်ခုခုထပ်စားပါလား ” သူလေးရဲ့စေတနာနဲ့ အမေးလေးကို စိတ်ထဲကျေနပ်သွားသလိုလိုဖြစ်ရင်း
” ဟုတ်သားဘဲ ကိုခင်ခ တစ်ခုခုမှာပါလား ” သူလေးနဲ့အတွဲဖော် ကျောင်းသူက၀င်ပြီး ပြောပြန်တော့ ခင်ခ စိတ်ထဲမှာတော့ ဒင်း ကျန်းမာရေးကလည်း ဒေါင်ဒေါင်မြည်တယ် တစ်ခါတလေလေး ကျောင်းပျက်ပါတော့လား ဒါဆို သူလေး တစ်ယောက်ထဲသာ အခုချိန်မှာဆိုလို့ တွေးရင်းနဲ့
” ကျွန်တော်စားပြီးပြီမို့ လဘက်ရည်ဘဲ မှာသောက်မယ်၊ ပေါ့စိမ့်နဲ့ ဒူယားတစ်ပွဲပေးကွာ “
” ကိုခင်ခ စီးကရက်တွေ အရမ်းမသောက်နဲ့လေ ” ရန်ကင်းသူလေးကပြောရှာတော့
” တစ်ခါတလေ တစ်ယောက်ထဲဖြစ်တဲ့အခါ ပျင်းတော့လည်း ဖွာဖြစ်တာပါ “
” ကိုခင်ခ ဒီနွေကျောင်းပိတ်ပြီး သင်္ကြန်ကျရင် ရန်ကင်းမှာရေလာပက်ပါလား သူတို့တွေရော အတန်းထဲက အခြားသူငယ်ချင်းတွေရော လာပက်မှာ “
” ဟုတ်လားဒါတို့ အတန်းဖော်တွေစုံကြမှာဆိုတော့ ပျော်စရာပေါ့ လာခဲ့မယ်လေ ”
အဲလိုနဲ့ စကားတွေပြောရင်း စားသောက်လို့ပြီးတော့ ခင်ခ အိတ်ကပ်ထဲရှိစုမဲ့စုပိုက်ဆံတွေလည်း မျက်နှာလုပ် မှု့နဲ့ အတူထွက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းဝင်းထဲကို သူလေးနဲ့ အတူလမ်းလျှောက်ပြန်ဝင်ရင်း အတန်းထိလျှောက်ခဲ့တဲ့ တစ်လျှောက်မှာတော့ သင်္ကြန်သူလေးတို့ဆီရေသွားပက်ရင်း သူလေးကိုရေလေးလောင်း ပိတောက်ခက်လေး ပေးလိုက်ရရင် ရင်ထဲပိတိဖြစ်မှာဘဲကို တွေးမိခဲ့တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ တက္ကသိုလ် နွေရာသီကာလ ကျောင်းခဏပိတ်မယ့် ကျောင်းတက်နောက်ဆုံးရက်မှာ ကျူတိုရီရယ်ရှိလို့ ခင်ခတစ်ယောက်အတန်းမှန်တက်ပြီး ဖြေခဲ့အချိန်မှာ အတန်းအပြင်ဘက် ကော်ရက်တာ(စင်္ကြန်)မှာ အသား ဖြူဖြူ ရုပ်ရည်ဖြောင့်ဖြောင့် ကျောင်းသားတစ်ယောက် လက်ထဲမှာစာအုပ်နှစ်အုပ်သုံးအုပ်လောက်ကိုင်ပြီး တစ်ယောက်ယောက်ကို စောင့်နေတဲ့ဟန်ကို ခင်ခ ကျူတိုရီရယ်ဖြေရင်း အတန်းထဲကလှမ်းကြည့်ကာ သတိ ထားမိလိုက်တယ်၊ ကျူတိုရီရယ်ဖြေပြီး ခင်ခ အတန်းအပြင်ထွက်တော့ ရန်ကင်းသူလေးက ခုနစောင့်နေတဲ့ ကျောင်းသားလေးဘေးမှာရပ်နေပြီး အဲဒီရှေ့က ခင်ခ ဖြတ်လျှောက်တော့
” ကိုခင်ခ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးရအုံးမယ် ဒါ အာအိုင်တီ ပဉ္စမနှစ်က ကိုဖြိုးတဲ့ “
” ဟုတ်ကဲ့ တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် ကျွန်တော်ခင်ခ ပါ ” လို့ဆိုပြီး လက်ဆွဲနုတ်ဆက်တော့
” ဟုတ် ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် ကိုခင်ခ သူကို အတန်းထဲမှာစာဆို အမြဲသင်ပေး ကူညီပေးတဲ့ သဘောကောင်းတဲ့ အကြောင်းတော့ သူပြောပြောနေလို့ နံမည်တော့အစထဲက ရင်းနှီးပြီး သားပါ လူကိုယ်တိုင်တော့ အခုမှဘဲဆုံတော့တယ် “
” ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်လည်းဆုံကြတာပေါ့ ကျွန်တော့်ဘော်ဒါတွေနဲ့ ကင်တင်းမှာချိန်းထားလို့ ခွင့်ပြုပါအုံး “
ဆိုပြီး ခုနကိုဖြိုးကိုရော သူလေးကိုရော နုတ်ဆက်ပြီး ခင်ခ တစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့ချိန် သူလေးက လှမ်းအော်ပြောလိုက်တဲ့
” သင်္ကြန်ရောက်ရင် ကိုခင်ခ ရေအတူပက်ရအောင် ရန်ကင်းကိုလာခဲ့နော် ဆက်ဆက်လာခဲ့နော် သူလေး မျှော်နေမှာ “
ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပေမယ့် ဘာမှပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘဲ လမ်းဆက်လျှောက်နေတုန်း စီကရက်ရောင်းတဲ့ လက်ပွေ့ ခလေးလေးတစ်ယောက်စီက ဒူယားစီးကရက်တစ်လိပ်ဝယ်ပြီး မီးညှိကာရိက်ဖွာလိုက်ရင်း လှိုင်နယ်မြေ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကစလို့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုတတိယနှစ်ထိရောက်လာခဲ့တဲ့ ရန်ကင်းသူလေးနဲ့ဆုံဖြစ်ခဲ့တာ တွေ စိတ်ထဲပြန်တွေးရင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဟေးလားဝါးလားလုပ်ဖို့ ထိုင်နေတာကင်တင်းကို စီကရက်လေး ဖွာကာလျှောက်သွားတော့ ဥသြဌက်က ဥသြ ဥသြ ဥသြ လို့ တွန်သံပြုနေကျအတိုင်း နွေဂိမ္မာန်မှာ တွန်သံပြု ပေမယ့် ခင်ခ ရင်ထဲမှာတော့ ပိုပြီးလွမ်းဆွေးကာများ တွန်သံပြုနေလားလို့ ထင်မိကာ အသံလာရာ သစ်ပုတ်ပင် ကြီးကိုရော်ရမ်းကာငေးကြည့်ခဲ့မိတယ်လေ။
အခု နွေဂိမ္မာန်ရာသီအပြောင်း ဥသြ ဥသြ လို့ တွန်သံကြားရပြန်တော့ တစ်ခါတုန်းက တက္ကသိုလ်ဆီ လွမ်းမိပြန်ပေါ့ကွယ်။
အဲ့လို ပျော်ပျော်ပါးပါး အကြော်ဆိုင်လေးထိုင်ပြီး . . .
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဟေးလားဝါးလား ကျောင်းတက်ဖူးချင်လိုက်တာ . . .
ခုတော့ လူမသိသူမသိ ဝေးကြီးမှာ. . . ဖုန်မှုန့်လိမ်းပြီး . . . ရိုးကောသွားသွားထိုးရတာ . . .
လွမ်းစရာဆိုလို့ တစ်နေ့ ၂ နာရီကားစီးရတာလေးပဲရှိပါတယ်ဗျာ . . .
စစ်အစိုးရ၏အမွေအနှစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ အဝေးကြီးလစ် ဆိုတာနဲ့ ကြုံခဲ့သူပေါ့ မမလေးက။
ခခ ရေးကာမှ ကျောင်းက လွမ်းစရာတွေကို လွမ်းသွားပြီ။
ချစ်သူတွေ အကြောင်း ရေးဦးမယ်
ချစ်သူပေါကြွယ် အစားအသောက် ၀ိုင်းဝိုင်းလည် ဒို့ အလှဘဂေး ဘရန်းဒက် ကေဇီ ရယ်ဆိုတာနဲ့ အညီပေါ့။
မမဂျီး ဒီရွာထဲက လူဂျီးတစ်ယောက်
ဟိုနေ့က နှစ်လိပ်ပူးပြီး သောက်နေတာ
၀တုတ်တုတ်ကြီးလည်း ဖြစ်နေလောက်ပြီနော် ..
(မှတ်ချက်။ ။ ဥခင်ခ အတွေး)
ယောက်ျားရတိုင်း ၀တုတ်တုတ်ဖြစ်ရမယ်လို့ ပုံသေနည်းရှိတာကျနေတာဘဲ ပြောပုံက။
သူညားတွေ ပေါလို့ ပေါကျိဒါ …
အဲ .. ဒါဆို ..
ရန်ကင်းသူလေးက ၀လာဘူးပေါ့နော် …
တစ်ခါသူ့သမီးလေးနဲ့ အတူဆုံခဲ့စဉ်ကတော့ ၀မလာပါဘူး၊ ကြာတော့ကြာပါပြီလေ။
ကန်တင်းမှာ သွားထိုင်ရင်တောင် ကြည့်စရာ မရှိတဲ့ဘွ
ကော်ရစ်ဒါ ရှိပါရဲ့နဲ့ ရပ်လို့မရတဲ့ဘွ…
လူတွေမှ ရှိပါလေစ လို့ တွေးရင်း တက်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားဘွ…
ဘာပဲပြောပြောဗျာ… ဖုန်ထူခြင်ပေါ၊ စိမ်းစိုသာမောတဲ့ ဒဟတ်တောကို ကျနော်လွမ်းပါကြောင်း….
အခုမန်းရောက်တော့ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မန်းကတက္ကသိုလ်တွေဆီ လှည့်လည်သွားခဲ့စဉ်တုန်းက ဆိုင်ကယ်လေးကို တစ်ညောင်းဘဲ အဝေး အဝေးကြီးတွေ မောင်းပြီးသွားခဲ့ရတယ် မောင်မာဃရယ်။
ကား လမ်း ဟို ဘက် ခြမ်း မှာ hi ဆို တဲ့ ဆိုင် လေး ရှိ သည်
ခြံ လေး ထဲ မှာ
ဝင် ပေါက် က ပြည် လမ်း မ ပေါ်မှာ မ ရှိ
ဘေး က လမ်း သွယ် လေး က နေ ဝင် ရ သည်
ခြံ စည်း ရိုး က ဝါး ပင် သေးသေး လေး တွေ နဲ့ ကာ ထား တာ မို့ 
အ ပြင် ကို ဝါး ရွက် လေး တွေ ကြား က မြင် နေ ရ သည်
အဲ့ ဒီ့ ဆိုင် လေး နဲ နဲကျော် လိုက် ရင်( ပြည် လမ်းမ ပေါ်မှာဘဲ)
ကြက် ဆင် မုန့်တိုက် ဆို တဲ့ ကိတ် မုန့်တွေ ရောင်း တဲ့ ဆိုင် လေး ရှိ သည်
ဒါဆို ဆိုင်အမည် Hi လို့ပေးထားတဲ့ ဤနေရာလေးကို snow smile တို့မှီခဲ့တယ်ပေါ့။
လွမ်းမောစရာ တက္ကသိုလ်နွေရက်များပေါ့ ကိုကြီးခရယ်…
ကျောက်စ်တို့တုန်းကတော့ သိပ္ပံကင်(န်)တင်း နဲ့ ဝိဇ္ဇာကင်(န်)တင်းပဲ ထိုင်တယ်…
ကိုကြီးခတို့ ကင်(န်)တင်းဘက်က ဝေးလို့၊ နောက်ပြီး အီကိုက မမတွေနဲ့ စက်မကျဘူး…
ဇာတ်လမ်းကြည့်ရတာ အာအိုင်တီက တီစကွဲယား စူးသွားပြီနဲ့တူတယ်… အာ ဟိ
ကိုခရေ…အဲဒီ hi စားသောက်ဆိုင်က အိုးသူကြီး နဲ့ မုန့်တာဝန်ခံက ကျုပ်ခယ်မပေါ့
ကောင်တာထိုင်တဲ့ ခပ်ပိန်ပိန်လူက ခုတော့ မယားညီကိုပေါ့ဗျာ…နောက်တော့
နေရာဖယ်ခိုင်းလို့ ရောင်းကောင်းနေရင်း လုပ်ငန်းရပ်သွားခဲ့တာ……..
အဖြစ် ဟောင်း ဆို တာ လူ တိုင်း ကိုယ် စီ ရှိ ကြ လေ သည် တဲ့
ကို ခ ရေ လွမ်း စ ရာ ကောင်း လိုက် တာ ဗျာ
( ဇာတ်လမ်းကြည့်ရတာ အာအိုင်တီက တီစကွဲယား စူးသွားပြီနဲ့တူတယ်… အာ ဟိ )ဆိုလို့ ကျုပ်တို့ အဲဒီတုန်းက ၀ိဇ္ဖာသိပ္ပံက ပျိုမေတွေက အာအိုင်တီတို့ ဆေးကျောင်းတို့က ကျောင်းသားဆိုရင် အလေးသာချင်ခဲ့တာ ဂုဏ်ယူခဲ့တာ ကိုကျောက်ရေ။ အဆိုတော် တူးတူးတောင် အာအိုင်တီကျောင်းသားဆိုလို့ ပိုလို့သဲသဲ လှုပ်ပရိတ်သတ်ဖြစ်ကြသေးတယ်လေ။
အခု Hi ဆိုင်ရှိရင်တော့ ကိုကြီးမိုက် အမည်ပြောပြီး အကြွေးတော့ စားလို့ ရချည်သေးနော့။ ဆိုင်ပိတ်သွားတာ နာတယ်ကွာ။
ကိုပေါက်ရေ ဒီလိုပါဘဲ ငယ်ဘ၀ အလွမ်းပြေလေးတွေပေါ့။
အဟိ… First Year, Second Year ဆို မမများက… MC , RIT မှ…
Third Year လည်းရောက်ရော… မေဂျာတူချင်း…
Final Year လည်းရောက်ရော… ဘာလာလာ ဒေါင်းသတဲ့… အားဟိ
ဆန်းတယ်ကွယ်. . . .
လေးခ အလွမ်းကို ဖတ်ပြီး
၈၈ တုန်း က စီး ပွား ရေး တ က္က သိုလ် လှူပ် ရှား မှူ့တွေ မှာ ပါ ခဲ့ တယ်
သေ နတ် နဲ့ ပစ် တဲ့ အ ချိန် ကြ တော့ အိမ် က ပေး မ ထွက် တော့
Hi မှာ ထိုင် ဖြစ် တာ များ တယ်
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘ၀။ အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ပြေးကာလွှားကာနဲ့ အမှတ်ယစရာဆိုလို့ အနဲလေးပဲကျန်ခဲ့ပါလား။ တူညားလဲ အားကျမခံပိုစ့်တင်အုံးမှ။ ရှိစုမဲ့စုချစ်ချုပ်ပြီးတင်လိုက်အုံးမယ်။
snow smile ဒါဆို ဘေးကပ်လျှက်ထိုင်ပြီး မသိခဲ့ကြတာများဖြစ်ခဲ့လေလားကွယ်။
TNA ရေ ဖတ်ဖို့စောင့်နေမယ်နော်။
ခေါင်းလောင်းသံချို ၊ နေမညိုခင်
ကျောင်းကို ပြန်ခဲ့ အချစ်ရေ ……
ပျက်ကြွေ ပျောက်ဆုံးမသွားချေ ……
ညအို ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်နေ ………
ကန့်ကော်တောက လွမ်းချင်းရှည် ………
သင် တန်း တက် ချင် လို့ပါ
က ဆာ မိ ရေး တာ တွေ ဖတ် ပြီး တော့ လေ
ဘာ ဆေး တွေ များ စား လဲ ဟင်
ဒုန်းးးးး ! (မြောက်တက်ပြီး ထုတ်တန်းနဲ့ဆောင့်မိသံ )
အစ်မရဲ့ ငယ်ဘဝ အလွမ်းပြေပို့စ်တွေဖတ်မိပြီး တိတ်တိတ်လေး နည်းနာခံနေတာပါဗျာ
နား ရွက် သို့ တက် ချိတ် နေ သော ပါး စပ် ကို
မူ ရင်း နေ ရာ သို့ရောက် အောင်
အ တော် ပြန် လုပ် ယူ ရ မယ် က ဆာ မိ ရေ
( နာ မည် ရာ ဇ ဝင် ခု ချိန် ထိ သိ ချင် နေ ဒုန်း )
ဘယ် နစ် က ကျောင်း ပြီး ခဲ့ တာ ပါ လဲ ခင် ခ ရေ
Eco က ပါ
snow smile ရေ ကျောင်းပြီးတာက ၁၉၉၂ မှပါ။ ၈၈ အရေးမှာ final ဖြစ်ပေမယ့် ကျောင်းပိတ်သွားလို့လေ။
ဒီနေ့.. အမှတ်တရပြောရရင်.. ၁၉၈၈ က.. အာအိုင်တီပဉ္စမနှစ်ကျောင်းသား ကမ်မစ်ကယ်က ကိုဖုန်းမော်နဲ့ မိုင်းနင်းက ကိုစိုးနိုင်… မတ်လ၁၃ရက်နေ့မှာ လုံထိန်းတွေပစ်တဲ့ ကျည်ဆံကြောင့်… ကျဆုံးတယ်..။
ကိုဖုန်းမော် အထက(၁)လသာ မှာ ကျောင်းတက်တုန်းကကျောင်းဖွင့်ရက်တိုင်း ခင်ခ နဲ့ မြို့ပတ်ရထားအတူစီးပြီး ၅ နှစ်လောက် ကျောင်းတက်ခဲ့တာလေ သဂျီးရေ။ ကျောင်းနေဖက် ငယ်သူငယ်ချင်းပေါ့ဗျာ။
ကိုဖုန်းမော်ကျည်ဆံထိသွားပုံအကြောင်း… မတ် ၁၃ ပို့စ်မှာတင်ထားတယ်..။
ကျောင်း မှာ ရှိ တယ်
သြော် ဟုတ်လား အလျဉ်းသင့်လို့ ဆုံဖြစ်မှဖြင့် မြင်ဖူးတဲ့ထဲများဖြစ်မလားဘဲနော်
အင်း ။ မှတ်မိသလောက် ပြောရရင် ။
အဲဒီ Eco နှင့် Science ဆောင်ကြားက ဦးရမ်းဘလူး ရှိတဲ့ ကန်တင်း ကို Eco ကန်တင်း ။
ဥပဒေတွေရှိတဲ့ ဘက်က ဦးချစ် ရှိတဲ့ ဘက်က ကန်တင်း ကို တောင်ဂူ ကန်တင်း ။
Science ဆောင် ဘက် ၊ ယောက်ျားလေး ဆောင်တွေဘက်က ကန်တင်း ကို Science ကန်တင်း ။
Recreation Centre ပါတ်လည်နားမှာ ရှိတဲ့ ကန်တင်း ကို R C ကန်တင်း ။
ဂျပ်ဆင် ဘေးနား လမ်းလေးမှာ ရှိတဲ့ ကန်တင်း ကို ဂျပ်ဆင် ကန်တင်း ။
ကျနော် အမှတ်မမှားရင် ၊ ကျနော် RASU တက်တုန်းက Hi မဖွင့်သေးဘူး ခမျ ။
နောက်ပိုင်း 2nd Mate ဖြေ ၊ အဝေးသင်တက်တော့ Hi ရှိနေပြီ ။
ကိုခ လုပ်တာနှင့် ၊ အမိ တက္ကသိုလ်ကြီးကိုတောင် သတိရသွားပြီဗျာ ။
အမိ တက္ကသိုလ်ကြီး RASU ကို ဘယ်လောက် ချစ်သလဲဆို ၊
နောက်ပိုင်း သင်္ဘောသား အရာရှိ 2nd Mate ၊ Mate ၊ Master စာမေးပွဲတွေအတွက် ၊
ဆင်မလိုက် ရေကြောင်း သိပ္ပံ မှာ ၊ ကျောင်းပြန်တက်ရတော့တောင် ၊
နေ့လည်စာစားချိန်ကျရင် တက္ကသိုလ်ကြီးထဲမှာဘဲ သွားစားခဲ့တာရယ် ။
( အစားအသောက်လဲ ဈေးပေါ ၊ သာမီးလေးတွေလဲ ချောသကိုး )
နောက်ဆုံး သင်္ဘောအရာရှိ Master တန်းအတွက် စာစုလုပ်တာတောင် ၊
အတန်းဖေါ်တွေစုပြီး RASU က စာသင်ခန်းလွတ်တွေမှာ သွားလုပ်ခဲ့တာကိုး ။
( ဟဲ ဟဲ ၊ ပါတ်ဝန်းကျင်က သင့်တင့် လျှောက်ပါတ်ပြီး ၊
ပတိရူပ ဒေသဝါသောစ ဖြစ်တော့ ၊ ဦးနှောက်ကြည်ပြီး စာပိုရတာပေါ့ )
ဟဲ ဟဲ ၊ RASU က ကျောင်းသူ သာမီးလေးတွေကလည်း ၊
ဒီ သေခါနီး အဖိုးကြီးတွေ ငါတို့ အခန်းထဲ ဘာလာလုပ်နေသလဲပေါ့ ။
နို့ သူတို့ RASU မှာလည်း ဒီလောက်မှ စာကျိုးစားစရာ မလိုတာကိုး ။
ဒါနှင့် ၊ အဘ တို့ စာလုပ်နေတဲ့နေရာနားကို ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့် နှင့် ၊
မသိမသာ ကပ်လာပြီး လာစပ်စုကြတယ်လေ ။
အဲဒမှာ ၊ သင်္ဘော ကပ္ပတိန် ဖြေဖို့ စာကျက်နေတဲ့သူတွေမှန်းသိသွားတော့ ၊
အဘဖောလည်း RASU မှာ အတော်ပျော်ခဲ့တယ်နဲ့တူတယ်နော်။
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်အခုပိုစ့်ထဲကကန်တင်းက အဘဖောပြောတဲ့ ဦးရမ်းဘလူးရှိတဲ့ Eco ကန်တင်းပါဗျ။
အရင်လလောက်က ရန်ကုန်ရောက်တော့ အဲဒီ RASU ထဲ ကိစ္စရှိလို့ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး သတိရသွားတာတဲ့ အလွမ်းပြေရေးလိုက်တာ အဘဖောရေ။
ဦး ယမ်း ဘီ လူး ဆိုင် ရှိ တဲ့ ကန် တင်း
အင်း လျား ကန် ဘောင် ဘက် က ဆိုင် တွေ
ပြီး တော့ Hi
Eco အ ဝ မှာ လှည်း နဲ့ လာ ရောင်း တဲ့ မ ချစ် စု သ ရက် သီး သည်
သူ ငယ် ချင်း တွေ ထဲ့ လာ တဲ့ ထ မင်း ဘူး
မာ လာ ဆောင် နဲ့ မာ လာ ဆောင် ရှေ့ က
ချာခ်ျ က ပေး ထား တဲ့ သူ ငယ် ချင်း တွေ ရဲ့ အ ဆောင်
လွမ်း လိုက် တာ နော်